International Movie Archives - YTV
Home » Programs » International Movie
September 30, 2020 10:43 am
ဖခင်ရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒကြောင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံက ဆက်ကပ်ပြတဲ့ကောင်လေးကို လိုက်ရှာဖို့ ခရီးနှင်မယ့်ကောင်လေးတစ်ယောက်အကြောင်းကို ကြည့်ရှုူခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်… ❓ သူ့အဖေရဲ့သူငယ်ချင်းကိုရော ရှာတွေ့နိုင်မလား ….? ? ဆပ်ကပ်ပြတဲ့ကောင်လေးနဲ့မှ ဘာလို့သွားစေချင်ခဲ့တာလဲ…? ဆိုတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုသိနိုင်ဖို့ တရုတ်ဟာသဇာတ်ကားလေး Buddies in India […]
September 30, 2020 10:37 am
အနောက်အာတိတ်မှာ အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်မလဲ…လေယာဉ်ပျက်ကြီးတစ်စီးနဲ့အတူ ရေခဲပြင်ဆီးနှင်းတွေကြားမှာ ဒုက္ခတွေ့နေရတဲ့သူတစ်ယောက်ကို သင့်အနေနဲ့တွေ့မြင်တဲ့အခါ ကယ်တင်နိုင်ပါ့မလား… ? ဒီဇာတ်ကားထဲမှာတော့ အဲ့လိုဒုက္ခရောက်နေရတဲ့သူနှစ်ယောက်ရဲ့ တွေ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေကို ရိုက်ကူးတင်ပြထားတာကြောင့် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားလို့ဆိုရမှာပါ… ? တောတောင်ကြားထဲက သားရဲတိရိစ္ဆာန်တွေကြား ဘယ်လိုဖြတ်သန်းသွားကြမလဲ…..? ? သူတို့နှစ်ဦး […]
September 29, 2020 6:58 am
Social Media Platform များနှင့် စကားပြောခြင်း…ဒီနေ့ခေတ်၊ ဒီလိုအချိန်မှာ ဆက်သွယ်မှုအတွက်အဓိကအသုံးပြုနေရတဲ့ Social Media Platform တွေအကြောင်း၊ ရုပ်မြင်သံကြား၊ အနားမှာရှိနေသလို ဝေးကွာသူတွေကိုခံစားမှုပေးနိုင်တဲ့ ဒီ Platform တွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ဘာတွေရှိနေဦးမလဲ… ❓ […]
YTV Channel ရဲ့ အက်ရှင်ဇာတ်ကားတွေနဲ့မှ Chill ချင်တယ်ဆိုတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် 4Got10 လာပါပြီ…ကိုကင်းတွေ ဒေါ်လာတွေပိုင်ဆိုင်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်သူမှန်းမသိ၊ ဘယ်ကလာမှန်းမသိတဲ့ လူတစ်ယောက်၊ ပိုက်ဆံအတွက်လား၊ ငွေကြေးအတွက်လား ဘာကြောင့်မှန်းမသိနောက်ကလိုက်နေတဲ့ လူတသိုက်… ? မေ့နေတဲ့သူရဲ့အတိတ်မှာ […]
စက်တင်ဘာ(၂၈) ရက်နေ့မှာကျရောက်မယ့် မင်းသမီး Hilary Duff ရဲ့မွေးနေ့မှာ သူမပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ “The Haunting of Sharon Tate” ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကို မွေးနေ့အမှတ်တရအဖြစ် YTV Channel ကထုတ်လွှင့်ပေးချင်ပါတယ်…. ? ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တစ်ယောက်ဟာ စိတ္တဇဖြစ်စရာ […]
September 28, 2020 11:41 am
ရုပ်ရည်လှပနေမှအသိအမှတ်ပြုခံရဖို့ ထိုက်တန်တာမဟုတ်ပါဘူး. နှလုံးသားလှသူတွေလည်း အသိအမှတ်ပြုခြင်းနဲ့ထိုက်တန်ပါတယ်ဆိုတာ သက်သေပြမယ့်ဇာတ်ကားလေးကို YTV Channel မှာ ပြသပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်… ? ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ရုပ်ဆိုးရုပ်ကလေးတွေထဲက မော်စီဆိုတဲ့အရုပ်မလေးကလေးဟာ အခြားသူတွေက သူတို့ကို လက်ခံပြီးချစ်ပေးလိမ့်မည်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်နဲ့ သူမရောက်ချင်တဲ့နေရာကို သွားခဲ့ပါတယ်. ဒါပေမယ့် […]
Daily Show (166)
International Movie (42)
Y Games (3)
Y Music (12)
ချစ်ခင်ရပါသော YIG ဝန်ထမ်းအဖွဲ့နှင့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့များအား အသိပေး ကြေညာခြင်း
Y Music (OST)